मन्त्री साहको आदेशमा गहुँबाली न’ष्ट गरी मेला लगाउने तयारी, राष्ट्रपतिले उ’द्घा’टन गर्ने ! – News543Online
March 3, 2021 adminLeaveaComment on मन्त्री साहको आदेशमा गहुँबाली न’ष्ट गरी मेला लगाउने तयारी, राष्ट्रपतिले उ’द्घा’टन गर्ने !
ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले महाशिवरात्रि मेला लगाउन किसानले लगाएको गहुँ बालीमा डोजर लगाएका छन् ।
‘नष्ट भएको बालीको मुआब्जा दिने भनिएको छ । तर त्यो मुआब्जाप्रति किसानहरू सन्तुष्ट छैनन्’ त्यहाँका किसानहरु भन्छन्, ‘एक क’ट्ठामा चारदेखि पाँच मनको हिसाबले उत्पादन हुन्थ्यो तर क’ठ्ठाको पच्चिस रुपैयाँ दिने भनेका छन्, हामीलाई निकै मर्का भएको छ । यत्रो मेहनतका साथ खेती लगाएका थियौं तर एउटा मेला लगाउनका लागि बालीमा डोजर लगाएर हामीमाथि अन्याय गरियो ।’
को हुन चिया वालि पुरा पढनुहोस !
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्वीरमा गोबर पोतेको आरोपमा एक पक्राउ